पञ्चायतले शिक्षाको अपनत्व खोस्यो, अहिले झोले शिक्षकहरुको उत्पादनले शिक्षालाई भयावह र दयनीय बनायो - Jerung Films
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 22 Jul 2019
संसारकै रितः सक्नेले सोल्टीमा लन्च खान्छ, नसक्नेले फुटपाथको पसलमा ममचा खान्छ
धेरै वर्षअगाडि १८७० तिर ड्यानुअल राइट भन्ने एकजना सर्जन लैनचौरको व्रिटिश रेजिडेन्समा झन्डैझन्डै १० वर्ष वस्यो । उसले अन्ततिर हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने एउटा मोटो किताबको पहिलो, १०० वर्ष नाघेको संस्करणमा भन्छन्ः द सब्जेक्ट्स अफ स्कुल एण्ड कलेजेज अफ नेपाल मे बी ट्रिटेड एज व्रिफली ए ड्याट अफ स्नेक इन आयरल्याण्ड ।
आयरल्याण्डमा सर्प पाइँदैन । त्यसकारण नेपालमा स्कुलको कुरा गर्नु आयरल्याण्डमा सर्पको कुरा गर्नुजस्तै हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि स्कुल छैन भनेर १८७७ मा उनी भन्छन् ।
तर वास्तवमा, त्योभन्दा अगाडि नै एउटा स्कुल आइसकेको थियो । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्केको तीनवर्षपछि वि.सं. १९१०मा थापाथली दरवारमा आफ्ना तथा भाइभतिजाहरुका छोराछोरीहरुका लागि भनेर दरवार स्कुल खोलिसकेका थिए ।
त्यहीकारण दरवार भनिएको त्यो स्कुल थापाथली दरवारको छिँडीमा थियो भनिन्छ । सर्वसाधारणका लागि त्यो स्कुल खुला गर्न झन्डै ३२ वर्ष लाग्यो । पछि रानीपोखरी छेउमा सर्यो र सर्वसाधारणका लागि खुला पनि भयो ।
पहिला पहिला त प्राइमरीमा मात्र थियो, पछि मिडिल स्कुल गर्यो, पछि गएर हाइस्कुलमा भयो । त्यहाँ पढाउनेहरु बंगाली बाबु भनिन्थ्यो, बंगालीहरु थिए, व्रिटिशहरु थिए ।
त्यहाँ लर्ड क्यानिङ भन्ने एउटा सुपरभाइजर वा हेडमास्टर थिए भन्ने कताकता उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी दरवार स्कुल त्यसबखतमा चल्थ्यो ।
त्यसबेला कस्तो खालको स्कुल खोल्ने भन्नेबारे दुई धारका विचारहरु आए । एकधारले पुरातन नेपाली भाषाको संस्कृत समेत पढाउने पाठशालाको रुपमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरे । त्यसको नेतृत्व जय पृथ्वीबहादुर सिंह, बझाङका राजा, ले गरेका थिए । उनी आफैं कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडिएट गर्नुभएको थियो ।
उहाँका भनाइमा अंग्रेजी शिक्षाले केटाकेटीहरुलाई टाढा राख्छ, त्यसैले हाम्रै स्थानीय नेपाली संस्कृत लगायतका शिक्षाहरु दिनुपर्छ । उहालाई पण्डित हरिहरले पनि बहुतै साथ दिनुभएको थियो ।
रमाइलो कुरा, त्यसबेला विश्वविद्यालय थिएन । छक्क लाग्दो कुरा, भारतको पहिलो विश्वविद्यालय व्रिटिशहरुले सन् १८४८ मा खोलेका थिए । युनिभर्सिटी अफ कलकत्ता, युनिभर्सिटी अफ बम्बे, युनिभर्सिटी अफ मद्रास लगायत खोलेका थिए । त्यसको १०० वर्ष नाघेपछि मात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् १९४९ मा खुल्यो ।
त्यसकारण कहिलेकाही म विचरा नेपाल भन्ने गर्छु । त्यति ढिलो चाहिँ हामी गयौं । राणाकालको अन्त्य हुँदासम्म त्रिचन्द्र कलेज मात्रै अन्डर ग्राजुएट कोर्स भएको विद्यालय थियो ।
सत्र सालमा पञ्चायत राज आएपछि केही वर्ष त्यत्तिकै चल्यो । २०२८ मा शिक्षाको नियम आयो । त्यसबेला हामीले नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयो । त्यसबेला म कीर्तिपुरको क्याम्पस प्रमुख थिएँ । यसले एउटा ठूलो भुइँचालो आयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, त्योभन्दा अगाडि स्कुल समुदायले चलाइरहेको हुन्थ्यो, सरकारको अलि अलि मात्रै सहयोग हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि भने शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो । त्यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुरुप थियो । स्कुल शिक्षकहरु, कलेजका लेक्चरर, प्रोफेसरहरुको आ–आफ्नो हैसियत स्थापित भयो, उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित भयो ।
यसरी सरकारले शिक्षाको लागि जिम्मेवारी लिनु एक किसिमले राम्रो देखिन्छ । तर उहाँहरुको आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा थियो । त्यो राजनीतिक एजेण्डा र शिक्षाको उद्देश्य नै राष्ट्र र राजमुकुटप्रति बफादार नागरिकहरु तयार पार्ने थियो । अथवा पञ्चायत व्यवस्थाअनुकूल आचरण गर्ने नागरिकहरु तयार गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । स्वभाविक रुपमा पाउलो फ्रेरे भन्छन्ः सबै शिक्षाहरु राजनीतिक हुन्छन् ।
वास्तवमा शिक्षा भनेको सधैं राजनीतिक नै हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तटस्थ हुन सक्दैन । त्यसअनुसार नै उनीहरुको पनि उद्देश्य राजमुकुट र राज्यप्रति वफादार तथा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलका आचरण गर्ने बफादार नागरिक तयार पार्ने नै थियो । त्यसमा अलिअलि पहाडे राष्ट्रवाद पनि थियो ।
सोहीअनुसार एक भाषा, एक भेष भन्ने खुब जोडसँग आएको थियो । म अहिले पनि सम्झन्छुः त्यसबेलाका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकसँग मैले कुरा गर्दै भनेको थिएँः हामीले जुन किसिमले बाहुन क्षेत्रीलाई पढाउँछौं, पर पर गाउँको शेर्पा, मगर राई, नेवारहरुलाई त त्यसरी नै पढाउने होइन नि । हामीले टिचिङ अफ सेकेन्ड ल्याङवेजको हिसाबले जानुपर्छ नि ।
उहाँले मलाई आँखा तरेर हेरेर के तिमीले मेरो जागिर खानुछ र भन्नुभएको थियो । नेपाली भाषा भनेपछि अन्य द्वितीय भाषाको त कुरै छैन । सबैको लागि यो अनिवार्य छ भन्ने धारणा थियो त्यसबेला । एक किसिमले त्यसबेलामा नेपाली भाषा लादिएको थियो ।
त्यसअघि सिनियर केम्ब्रिज भनेर सेन्ट जेभियर्स, सेन्टमेरिजले चलाउँथ्यो, त्यो पनि खारेज भयो । सबैतिर नेपालीमै पाठ्यक्रम गरेर चलाउनुपर्ने भयो ।
एकाध सकारात्मक कुराहरु पनि थिए । सेमेस्टर प्रणाली लगाइएको थियो । वस्तुगत प्रश्नहरु थिए, नेशनल डिभलेप्मेन्ट सर्भिस जस्ता एकाध राम्रा राम्रा कुराहरु थिए । तर सेमेस्टर प्रणालीमै पनि तयारी चाहिँ राम्रो थिएन । दरवारका छेउछाउका एकाध टाढाबाठाहरुले माथिबाट तल (टप डाउन) भनेर लाद्ने गर्थे ।
हामीलाई पनि एक पटक केशर महलमा बोलाएका थिए तर प्रश्न गर्न निषेध गरिएको थियो, उनीहरुको योजना सुन्ने, प्रश्न गर्दै नगर्ने र सिद्धियो, जानोस् भन्ने खालको कार्यक्रम थियो । त्यसरी आएको थियो ।
नेपालमा दाताहरुको ठूलो बोलवाला हुन्छ । उनीहरुको दवाब धेरै हुन्छ ।केन्याको उदाहरण दिएर सामुदायिक स्कुलको मोडेलमा जानुपर्छ भनेर धेरै दवाबहरु दिए । सामुदायिक स्कुलको अवधारणा नराम्रो पटक्कै होइन । राम्रो हो, नेपालमा पनि पहिले त्यसरी नै चल्थ्यो ।
तर सरकारले चलाइरहेको स्कुल स्वाट्टै सामुदायिकमा लैजाँदा कुनै पनि शिक्षकहरुको सहयोग रहेन । मलाई लाग्छ, सामुदायिक स्कुलहरु राम्रो चल्न सकेन । यद्यपि, यसका पछाडिका कारणहरु थुप्रै छन्, जसलाई यहाँ चर्चा गरिबस्न सम्भव छैन ।
त्यही संशोधनले अर्को पनि ठूलो भुइँचालो ल्यायो । त्यसबेला आमोद उपाध्याय शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसले व्यापारिक स्कुलहरु सञ्चालनका लागि ढोका खोलिदियो । त्योभन्दा अगाडि पनि फाटफटु निजी स्कुलहरु नभएका होइनन् तर तिनीहरु त्यस्तो नाफामुखी खालका छैनन् ।
फेरि कस्तो चलाख, नाम चाहिँ संस्थागत विद्यालय राखे । अहिले स्कुलहरुमा नेपाल भारतका ठूला ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको लगानी छ । नेपालमा वियरमा भन्दा स्कुल कलेजमा लगानी गर्नु बढी फाइदा छ भनिन्छ । अझ मेडिकल कलेजहरुमा त झन फाइदा छ । यसले भयंकरसँग विकृति शुरु गर्यो ।
२००५ मा हामीले केही अध्ययनहरु गर्यौं । मैले भन्दा पनि प्रोफेसर मीनबहादुर विष्ट र विश्वविद्यालयका केही साथीहरुले त्यो अध्ययन गर्नुभएको थियो । म त संयोजक मात्रै थिएँ । त्यसमा हामीले निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेका थियौं ।
सार्वजनिक स्कुलहरुमा ९५ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् । निजीमा करिबन १० – १५ होलान् । सार्वजनिकमा तलब राम्रो छ, निजीमा ठिक ठिकै मात्र छ । सार्वजनिकमा जागिरको सुरक्षा छ, निजीमा कहिले निकालिन्छ थाहा छैन । त्यो हुँदाहुँदै पनि कार्यसम्पादन चाहिँ निजीको राम्रो भयो ।
त्यसको कारण पत्ता लगाउन थप अध्ययन गर्न पुनः उहाँहरु जानुभयो । के थाहा लाग्यो भने निजीमा दिनहुँ पढाइ हुन्छ र कुनै कारण अवरोध भयो भने पनि प्रतिस्थापनमा भोलिपल्ट त्यो पढाइ पूर्ति गरिन्छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढाइ हुने ठेगानै छैन ।
अहिले पनि शिक्षकहरु अनुपस्थित वा गयल हुने कुरा उच्च छ । निजीमा नियमित पढाइ हुने, सार्वजनिकमा नहुने, निजीमा नियमित गृहकार्य गराइने गरिन्छ, जुन चाहिँदोभन्दा बढी नै हुन्छ (हाम्रो अध्ययनमा गृहकार्यको पनि नीति हुनुपर्छ भन्ने औंल्याइएको छ ।
सार्वजनिकमा गृहकार्य नै गराइन्न । निजीमा विद्यार्थीहरुले गरिरहेका प्रगतिको नियमित परीक्षण र जाँचपड्ताल गरिन्छ भने सार्वजनिक स्कुलमा दुई तीनवटा परीक्षा बाहेक अरु कुनै परीक्षण र जाँच पड्ताल गरिन्न । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निजी स्कुलमा कमजोर विद्यार्थीलाई पढाइ उकास्नको लागि मद्दत गरिन्छ, सार्वजनिकमा त्यो गायब छ । कमजोर विद्यार्थीहरु त्यसै छाडिएका छन् ।
नेपालको शिक्षामा जवाफदेहीता नहुनुको मुख्य कारण नै धेरैले राजनीतिक पार्टीहरुको बरदान पाउनु नै हो । यो यति दयनीय स्थिति छ, यसले नेपालको शिक्षा त गयो । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न पुग्दा उनीहरु प्रधानाध्यापकप्रति, व्यवस्थापन समितिप्रति, अभिभावकहरुप्रति जवाफदेही नै भएनन् ।
उनीहरु आफ्ना राजनीतिक संरक्षकप्रति मात्रै जवाफदेही भए । प्रधानाध्यापकहरु हतोत्साहित, मानमर्यादा गिरेको अवस्थामा छन् । बारा पर्साको भ्रमणपछि मैले संसदमा त्यहाँको स्थिति राख्दा बताएको थिएँः जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको अवस्था दयनीय छ ।
आफ्नै कार्यकक्षमा सहज ढंगले बस्न सक्दैनन् । माथि केन्द्रबाट अनि स्थानीय तहमा स्थानीय नेताहरकै पनि चर्को दवाब छ, वर्षको २, ३ पटक फेर्छन् । कोठाका ढोका तारहरु सद्दे छैनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापकको क्षेत्राधिकारमा चुनौति दिइने अत्यन्तै भयावह स्थितिमा कसरी चल्छ ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा स्कुलको अपनत्वसहितको स्वामित्व लिने कुरा (ownership) भएन । यो मेरो स्कुल हो, हाम्रो स्कुल हो भन्ने अपनत्व नै भएन । म त्रिचन्द्र कलेजमा जाँदा ५० वर्षअगाडि जुन कक्षामा पढाउँथे, त्यही कक्षामा पुगेको छु । यसो हेरें, ५० वर्षपछि पनि १ कोट रंग समेत लगाएको छैन ।
ऐनाहरु फुटेको छ । त्यसमा अपनत्वपन, स्वामित्वबोध नै कहीँ पनि देखिँदैन । मैले यो कलेज कोसँग सम्बन्धित छ भनेर सोच्दैसोच्दै घरसम्म आइपुग्दा यो कसैसँग पनि सम्बन्धित छैन भन्नेमा पुगें ।
तर मेरो भनाइः शिक्षामा त्यसो भन्न पटक्कै मिल्दैन । यथास्थितिलाई मान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा द्वैध स्थितिलाई जन्म दिन्छः हुने र नहुनेको शिक्षा । यसले समाजलाई नै तह तहमा विभाजित (stratify) गरिदिन्छ । यो केटा र केटी त्यो स्कुलमा जान्छ, अर्थात् बडा धनीका छोराछोरी रहेछ, यो उता जान्छ, अलि कम धनीको छोराछोरी परेछ, अलि मध्यम वर्गको रहेछ ।
यसले सम्पूर्र्ण विद्यार्थीहरुलाई नै तह तहमा विभाजित, वर्गीकृत गरिदियो । हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार्ने त ? समाजवादमा विश्वास गर्ने, समाजवादोन्मुख भन्ने हामीले यस्तो कुरालाई सहिराख्ने त ?
धेरै वर्ष पहिले जेम्स कोलमेन भन्नेले अमेरिकामा एउटा अध्ययन गरेका थिए । पछि क्रिस्टोफर जेम्स भन्नेले पनि त्यस्तै अर्को अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुको अध्ययनले भन्छः स्कुल एण्ड टिचर्स एक्जर्ड लिटिल इन्डिपिन्डेन्ट इफेक्ट अन द एकेडेमिक पर्फरमेन्स अफ चिल्ड्रेन ।
अर्थात् स्कुल र शिक्षकहरुले विद्यार्थीहरुका स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षमता विकासका लागि कमै अभ्यास गर्छन् । त्यसले अभिभावकहरुलाई फरक पर्दैन ।
सरकारले विचार गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक सामाजिकीकरण पनि हो । हाम्रो सरकार र राजनीतिले, देश समाजको बारेमा के कल्पना गरेको छ ? नेपाली समाज मिलनसार, समतामुलक ज्ञानी समाज बनाउन खोजेको छ कि ? त्यसको लागि एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण (Vision) हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सिंगापुरका ९८ प्रतिशत केटाकेटीहरु सार्वजनिक स्कुलमा पढ्छन् ।
सिंगापुरले त्यसो गर्नुको अर्थ समाजलाई यसरी लग्छु भन्ने उसको सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ । अहिले हाम्रो के दृष्टिकोण छ ? सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीहरु घट्दैछन् जबकि सामाजिकीकरण गर्ने भनेकै सार्वजनिक स्कुलहरुबाट हो ।
अमेरिकामा राजनीतिक सामाजिकीकरण (Political socialization) भनिन्छ । शीतयुद्धको बेलामा अमेरिका र रुसमा के कति राजनीतिक सामाजिकीकरण भएको छ भनेर एउटा अध्ययन भएको थियो । रुसमा ५ देखि ११ कक्षाका केटाकेटीहरुको ३८ प्रतिशत राजनीतिक सामाजिकीकरण हुन्छ भने अमेरिकामा ४६ प्रतिशत ।
भनिन्छ नि, अल सोसाइटीज इन्डक्टिनेन्ट एण्ड स्कुल्स आर द मेजर एजेन्टस इन द प्रोसेस । समाजका सबैले आफ्ना मूल्य मान्यताअनुसार बिना कुनै आलोचना कुनै पनि कुरालाई स्वीकार्न (indoctrinate) सिकाउँछ । र, त्यो कार्य चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट हुन्छ । त्यसैले पनि मेरो विचारमा हामीले सार्वजनिक शिक्षामा बढी जोड गर्नुपर्छ ।
केही समयअघि भएको शिक्षाको नवौं संशोधनले समग्र शिक्षकहरुको ५१ प्रतिशतलाई नयाँ ल्याउने र ४९ प्रतिशत स्थान चाहिँ पुरानालाई दिने व्यवस्था गरियो । पछि त्यो पनि उल्टिएर ७५ प्रतिशत चाहिँ झयालबाट चढेर, चिम्नीबाट छिरेर आएका, राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा आएका, क्षमता नभएका पुरानालाई छुट्याइएको छ ।
नयाँ क्षमतावान, उर्जावान र शिक्षणमा केही गर्छु भन्ने जोश जागर भएका युवाहरुलाई चाहिँ बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । एकजना शिक्षाविदका अनुसार यसले नेपालको शिक्षालाई २० २५ वर्षपछाडि धकेलेको छ ।